YUFA dia hanatrika ny fihaonambe fampiroboroboana ny indostrian'ny refy momba ny 30 taona an'ny Fikambanana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-13
Ny Forum 30 ho an'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny Refractory an'ny Fikambanana (fihodinana faharoa) dia hotontosain'ny The Association of China Refractories Industry (ACRI) ny 31 martsa-2 aprily 2021 ao Luoyang, faritanin'i Henan. ny indostrian'ny marefo ao ...
Fahitana an'ny YUFA ho an'ny ho avy
Manaraka izany, ny YUFA dia mikasa ny hanao fatana fandoroana herinaratra roa (zavamaniry Ruzhou), izay afaka mampitombo ny fahafahan'ny famokarana corundum 20.000 taonina; Zhengzhou YUFA Fine Ceramics Technology Co., Ltd. dia mikasa ny hanampy tsipika famokarana lafaoro vaovao hampitomboana 20 000 taonina ny fahafaha-manao ny alimina vita amin'ny kolazy. Midika ...
Fihaonamben'ny fifanakalozam-pahaizana ho an'ny firenena nasionaly 2021
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-26
Zhengzhou YUFA Abrasives (Group) Co., Ltd. dia nandray anjara tamin'ny fampiantranoana ny "2021 National Refractory Materials Academic Exchange Conference" kasaina hatao any Chongqing ny 10-13 Mey 2021. Amin'ny fiandohan'ny Taom-baovao 2021, Zhengzhou YUFA Abrasives (Group) Co., Ltd., tahaka ny ...
Ny fikirizan'ny YUFA sy ny antoka momba ny kalitao
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-26
Ny vokatra tsara dia avy amin'ny fifehezana kalitao hentitra. YUFA Group dia manome lanja lehibe ny fifehezana ny kalitaon'ny vokatra amin'ny lafiny rehetra. YUFA dia manana rafitra fanaraha-maso kalitao feno sy hentitra. YUFA dia namolavola mari-pamantarana orinasa mitovy amin'ny mpanjifa sy ny vokatra samihafa ary ny stric ...
Ny fampirantiana seramika iraisam-pirenena Shanghai faha-13
Zhengzhou YUFA Fine Ceramics Technology Co., Ltd. dia nasain'ny International Advanced Ceramics Organization handray anjara amin'ny fampiratiana Shanghai International Advanced Ceramics 13th tamin'ny 12 Aogositra ka hatramin'ny 14 Aogositra. Ny filohan'ny orinasa Andriamatoa Zhang, dia tonga teny an-toerana, me ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-04-26
Manohitra ny coronavirus, YUFA dia manaraka tanteraka ny fepetra fisorohana COVID-19 nasionaly sy ny fitsipika mifandraika amin'izany mba hiantohana ny fiarovana ireo mpiasa. Mba hiantohana ny asa famokarana ara-dalàna, dia misy ny fepetra fitantanana voarindra mba hamaly mavitrika ny fanambin'ny virus. Ny orinasanay dia naka ...
Andraikitry ny orinasa YUFA sy andraikitra ara-tsosialy
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 08-12-26
Ny alumina fotsy mifangaro dia an'ny vokatra indostrialy fototra ao Shina. Amin'ny maha "nify indostrialy" azy, dia be mpampiasa amin'ny abrasives, akora marefo, akora vita amin'ny seramika, akora elektronika, fikosoham-bolo sy poloney, fanariana marina, fitaovana fananganana, solika, aerospace, miaramila ary ...
YUFA Abrasives Group dia manohy manao fikarohana sy fampandrosoana
avy amin'ny admin tamin'ny 07-08-26
Zhengzhou YUFA Abrasives Group Co., Ltd. dia mahatakatra ny fangatahana, manaraka ny tsena, ary manana fahasahiana manavao sy mizaha amin'ny fomba mavitrika amin'ny lalan'ny fikarohana sy fampandrosoana vaovao. Naharitra dimy taona mahery ny fampivelarana teknolojia fanalana sodium natokana ho an'ny electrofusion. Amin'ny alàlan'ny ...